Dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo Ciidamo ka wada tirsan dowladda ku dhex maray degmada Marka – idalenews.com
Waraka ka imaanaya magaalada Marka ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay uu ku dhex maray Ciidamo ka wada tirsan dowladda, iyadoo dagaalka uu saameyn ku yeeshay guud ahaa magaalada.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii Taliye ka tirsan ciidamada ku sugnaa aaga Buufow lagu dilay halkaas, iyadoo kadib iska hor imaad uu ka dhacay deegaanka.
Dilka Taliyahaas ayaa kadib waxaa xiisad ka dhex bilaabatay labo ciidan oo qaab beeleed isu bedeshay dagaalkooda, waxaana dagaal culus uu ku dhex maray gudaha magaalada Marka, kaasoo labada dhinac isu adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan.
Mid ka mid ah Saraakiisha Maamulka Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid saameeyay guud ahaan magaalada, goobaha ganacsigana albaabada loo laabay, waxaana rasaasta laga maqlayay gudaha magaalada.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalka ku dhintay ilaa afar askari oo ahaa labada ciidan ee dagaalamay, waxaana mar dambe gaaray magaalada Marka saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo kala dhex galay labada ciidan.